तराईका ती दशैँहरू | मझेरी डट कम
editor — Sun, 07/24/2016 - 22:38
पुस्तक पढ्नुभन्दा प्रकृति पढेर धेरै गुणा फरक ज्ञान हाँसिल गर्न सकिँदो रहेछ । अँझ लेखनकलालाई आफ्नो वृत्ति बनाएका लेखकले त आफ्ना बाल्यवयका परिघटनाहरूलाई लेखेर कहिल्यै नसक्ने रहेछन् । यस्ता ज्ञान ममा आएको धेरै भएको छैन । कहिलेदेखि आयो त्यो झट्टै सम्झन सकिरहेको पनि छैन ।
म बीसको दसकमा मोरङमा जन्मेको हूँ । औलोको तरानले भर्खरभर्खर मुक्ति पाएका बेला पहाडबाट मधेश झरेका बूढापाकाहरू भन्थे रे –‘मोरङमा एक रुपैयाँका अन्नले बाँचुन्जेल खान र मरेपछि कृया गर्न पुग्छ ।’ किन यसो भनिएको होला ? म धेरै पछिसम्म पनि गहिरिएर सोच्थेँ । कुरोको चुरो अर्कै रहेछ । जुनबेला मोरङमा एक रुपैयाँमा जति अन्न पाइन्थ्यो त्यतिले एकजना मानिसलाई हप्तापन्ध्र दिन खान पुग्थ्यो । हप्तापन्ध्र दिन बाँच्दा नबाँच्दै त्यो मरिज औलोले मरिसक्थ्यो अनि बाँकी बक्यौता अन्नले उसको काजकृया गर्न समेत भ्याउँथ्यो । साँचो रहेछ त्यो कुरा । आखिर बूढापाकाहरू किन झुट बोल्थे । उनीहरूले बकेका हरेक कथा र गाथाहरू अहिले हाम्रा लागि किम्वदन्तीमय मार्गदर्शन बनेका छन् ।
तराईमा मेरा बाल्यवयका धेरै दसकका दशैँहरू बितेका छन् । ती दशैँले मलाई अहिले अनेकानेक लेखनका गुत्थीहरू दिएका छन् । केही हास्यास्पद र केही रागात्मक विषयमा मैले भोगेका ती दशैँबाट विषयका पाँजा झिकेर अहिले म आत्मरतिका भाव पोखिरहेछु ।
दिन, महिना र वर्ष हुँदै अहिले ती सम्झनाहरू मानषपटलमा दसकौंका फालक भएर रहेका छन् ।
‘दशैँ आयो । खाऊँला पिऊँला । कहाँ पाऊँला ? चोरी ल्याऊँला । धत्त पापी म त छुट्टै बसूँला ।’ सोह्रश्राद्ध सकिएर नौरथा लाग्नेलाग्ने बेलामा चारैतिरका परिवेशमा ढोलक बजेको सुनिन्थ्यो । बाक्लो ग्रामीण वस्तीमा यो एक निःशुल्क जनाउ हुन्थ्यो –दशैँका लागि । हामी ढोल बजाउँदै घरघर आउने ती बूढा पोयाका दलित जातिका मान्छेहरूलाई बालशुलभ बोलीमा‘ढोलिया’ भन्थ्यौं । कुनकुन जातिका मानिस हुन्थे तिनीहरू ? हामी खोजीखबरी केही गर्दैनथ्यौं । बाआमाले पनि नाटीखुटी केही भन्थेनन् । केटाकेटी बुद्धिले त्यो खुट्याउन सक्ने कुरो पनि भएन । अनि बज्न थाल्थे रेडियो नेपालमा मालश्रीका सुरम्य कर्णप्रिय धूनहरू । मालश्रीका धून, देवीभजन र यदाकदा सूरअसूरका रेडियो नाटकसँगै केटाकेटीमय पारामा‘दशैँ आयो’ जस्ता बालगित पनि उफ्रीपाफ्री गरेर गाइन्थ्यो । हार्दिकता लपक्कै गाँसिएका थिए –ती दशैँका दिनहरूमा ।
कोठेबारीमा दशैँलाई भनेर घाँस साँचिन्थ्यो । बोडीका लहराले जेलेका बन्सो घाँस काटेर गाईभैँसीलाई खुवाउन थालेपछि बल्ल नौरथा मध्ये भएको भान हुन्थ्यो । तिनताक सनपाटको खेती मोरङ र सुनसरीतिर उधुमै हुन्थ्यो । हाम्रा खेतमा पनि सनपाट (पटुवा) लगाइन्थ्यो । पटुवाको साग असाध्यै मिठो हुने हुँदा पटुवा गोडेका बेला बिँडाएर साग टिप्ने चलन थियो । ओइलाएका पटुवाका सागमा सुकेका राता खोर्सानी पड्काएर बनाइने तीतोतीतो स्वाद्को तरकारी खूब मिठो हुन्थ्यो । दोस्रो तरकारीका रूपमा भागमा हुने पटुवाको सागको स्वाद् सम्झँदा अहिले पनि जीव्रामा पानी भरिएर आउँछ । कठै ! ती दिन गैगए ।
कल्पनाको पुतली समाउन कटी पतङ्गझैँ बेधडक उडिन्थ्यो ।
भुइँ छाड्न मन भए घरमा हालेको खाँबे पिङ र साथी भाइसँग रमाउन मन भए गाउँलेहरू मिलेर बनाएका लिङ्गे पिङ छँदै थिए । बाउ आमाले नै बेबहार निखन्ने हुँदा आफ्ना तर्फबाट कुनै जिम्मेवारी नहुनाले मस्ताराम हुने एक प्रकारको छुट दिएको थियो –जिन्दगीले ।
पाकेको महिनाको तलब होस् या रिनपान गरिएको पैसो । कहिले त खसीबोका बिक्री गरेर आएका थोरबहुत पैसा केही पत्तोफाँट हुँदैनथ्यो ।‘शोक न सुर्ता भोक न भकारी’ भनेझैँ शोधखोजको पर्वाह पनिरहन्थेन । बाल रहरका बैँकमा भएका जति पनि चेकहरू साट्ने सुविधा थियो –उसबेलाका दशैँतिहारजस्ता पार्विक माहोलमा हामी केटाकेटीहरूलाई ।
कर्मचारीवृत्त परिवारका सम्बन्धमा उबेला यस्तो कहावत् गरिन्थो‘कुखुरो काट्यो दशैँ, झोला बोक्यो बसैँ’ तर हाम्रा परिवारमा प्रायः कुखुरो काटेर दशैँ मनाएका रानारूनी सम्झौटाहरू पनि छैनन् । बरू यतिखेरको राजधानी बसाइले आफूलाई किनौरे (किनेर नै बाँच्ने) बनाएको छ ।
त्यस बेलामा हाटको चलन उधूमै हुने । सोमबार र बिहीबार हाम्रा घरदेखि नजिकै साप्ताहिक हाट लाग्ने गर्थे । हिँङदेखि हर्दी (बेसार)सम्म फलामदेखि सिलामसम्म सबैथोक हाटमै सस्तो मोलमा पाइने र मोलमोलाई गर्ने छुट पनि हुने भएकाले कुन धनी कुन गरिब सबैले आफूलाई सोमबार र बिहीबार अनिवार्य रूपमै हटारू बनाउँथे । नगदको चलन यदाकदा कर्मचारीले मात्रै गर्दथे । गृहस्थीका लागि अन्नपात बेचेरै सौदा खरिद्नु एकमात्र उपाय हुन्थ्यो । नबेचे निरुपाय । हामीचाहिँ नगदजिन्सी दुवैको प्रयोग गर्दथ्यौं । आखिर हाम्रो परिचय कर्मचारीको परिवारमा पर्दथ्यो ।
दशैँमा नयाँ लुगा हाल्दिने चलन गाँवैभरि थियो । अँझ हाम्रा घरमा त झन् अनिवार्यजस्तै थियो । लुगा किन्नका लागि बजारमा मारबाडीका कपडा पसल बग्रेल्ती थिए ।‘सुनसरी स्टोर’ ती मध्येको माउ दोकान थियो । जहाँ‘राजादेखि रङ्क’ सबैलाई हुने खाले कपडाहरू पाइन्थे । सके नगदमा किन्ने नसके उघारो खाता खोलिएको हुन्थ्यो । अलि साना हुँदा आमा र बामात्र जानु हुन्थ्यो । पछि हामिरहर गर्ने हुन थालेपछि हामी पनि साथै पछ्याउँथ्यौं । रोज्जा कपडा लिएर दमाईकहाँ गएर लुगा छेकिन्थ्यो । आला कपडाका बास्ना यति बास्नादार हुन्थे कि त्यसैले पनि बाल मष्तिस्कमा दशैँ आएको निमन्त्रणा गर्दथ्यो ।
रहरको कुनै सरहद् हुँदैनथ्यो । जे किनिदिए पनि हुने । जस्तो लगाइदिए पनि हुने । ग्यालेजवाला पाइन्ट र फूलसर्ट लगाउने चलन औधी चलेको थियो । बाबरी छाँट्नै पर्दथ्यो । स्कुलका मास्टरजीहरू अति कडा मिजासका हुने भएकाले लामो कपाल पालेर स्कुल जान दिँदैनथे । अदव राख्नु पर्दथ्यो घरमा होस् या स्कुलमा । अनुशासन किताबमा मात्र नभएर बेबहारमा पनि खोजिने जमाना थियो –ऊ बेलामा ।
सम्झनाका पत्रहरूमा चाङ् लागेका ती दशैँहरूलाई सबैभन्दा मुन्तिरबाट झिकेर हेर्ने हो भने सप्तरङ्गी इन्द्रेणीझैँ रम्यताको तालमा छम्छमी गरेर नाँच्न थाल्छन् ।
त्यतिबेला जीवनमा लेखक भइन्छ भन्ने पूर्वाभाष मात्रै भएको भए पनि अँझ उधुमसँग उपध्रो गरेर बालापन् बिताइन्थ्यो होला । काश, मनुवा भविष्यगामी भैदिए, आउनेवाला जिन्दगीको पूर्वतयारी गरेर जीवनलाई अँझ चकाचौँध बनाइन्थ्यो होला ।
हामी सामान्य मानिसलाई मात्र होइन संसारका महापुरुष पनि भविष्यवेत्ता हुन सक्दैनन् –सायद् । भोग्दैजाँदा र खेप्दैजाँदा जिन्दगीले जेजे गर्न लगाउँछ त्यहीत्यही गर्ने रहेछन् –मानिसले । कहाँ कतिखेर कस्को जीवनमा‘यु टर्न’ हुन्छ त्यो कसैलाई थाहा हुन्न ।
अहिले आफ्ना थाप्लामा बोझ बन्न थालेपछि झोलामा दशैँ बोकेर आफैँले टार्न थालेको दसक नाघिसक्यो । भाइहरू विदेश बत्तीनुभन्दा अघिसम्म रामेछापबाटै भए पनि जखमले खसी घिस्याउँदै दशैँदशैँमा लेराउँथे । तीनभाइ हामी । दुई भाइको घर टीकाथली । अहिलेको महालक्ष्मी नगरपलिकामा । वल्लो गल्ली पल्लो गल्ली मात्र फरक । माइलो अलि पर कपनमा । ऊसँग लक्ष्मी पनि अलि धेरै खुसी भएकीले होला आफैँ जोरजाम गर्थ्यो ।‘सान्कान्छो र ठूले एकै ठाउँ छौ मिलेर चाडवाड मान’ मायालु भावमा भन्नु हुन्थ्यो –बा ।
घराँ बाको आदेश काट्ने हिम्मत कहिल्यै कसैले गरेन । अँझै गरेको छैन । छोरी नभाको हाम्रो घर औपचारिक रूपमा बेगल भएको छैन । अनि हामी सगोलमा पनि छैनौं । आफ्नो मानो खाएर अर्काको कुरा गर्ने बानी हामीले कहिल्यै जानेनौं । पसिनाले बँचाएको छ यतिखेरसम्म –हामी सबै दाजुभाइलाई । दुईभाइ विदेशमा पसिना चुहाउँदै श्रमजीवी भा’का छन् । मचाहिँ देशमै पसिना निकालेर श्रमजीवी र अलिकति कलमजीवी भएको छु ।
हाम्रो घरमा बा कम्युनिष्ट पार्टीको प्राधिकार सम्पन्न त्यस्तो‘सुप्रिमो’ हुनुहुन्थ्यो जसका अघि हामी पोलिटव्युरोमा रहेर निर्णय मान्ने फड्के साक्षीजस्ता थियौँ । राम्ररी परिवार सञ्चालन गर्नु पनि पार्टी चलाउनुजस्तै रहेछ । वहाँको कमाइमा बसुन्जेल हामीले बाका आदेशमय फर्मानलाई त्यसरी नै मानेऊँ जसरी‘गिरिजा बाउ बाँचुन्जेल काँग्रेसमा उनको रजगज रहेको थियो ।’
बा जो दमडी र सांस्कारी हिसाबमा अति कडा हुनुहुन्थ्यो । केटाकेटीमा उपध्रो गर्दा बाले पिटेका सम्झनाहरू मनका कुनामा पत्रे चट्टान बनेर खाँदिएका छन् । सम्झनामा‘आउट डेटेट’ हुन लागेका ममोरी कार्डबाट अहिले फुत्त निकालेर शततः निफन्न पाइएको छ । हलौं हुन्छ छाती पुराना कुरा कोरल्न पाउँदामा पनि । तेतिबेला ननिका लागे पनि अहिलेचाहिँ ती अनेकानेक उपध्रामय सम्झनाले आल्हादित बनाएरै छाड्छन् ।
‘बाउले सदाएको छोरो र आमाले अह्राएकी छोरी’ उखानलाई म अहिले पनि छापामार शैलीमा कुम हल्लाएरै स्यालुट गर्छु । आमाबाउले जस्तो बनाउन खोज्छन् –सन्तान त्यस्तै बन्ने रहेछन् । अहिले म आफ्ना सन्तानमा त्यही कुरा कार्बन कपीझैँ अनुभूत गरिरहेछु ।
हाम्रा बा नचाहिने काम नगर्ने तर चाहिने काममा खर्चबर्चको राँटा रहनै नदिने गरी बेबहार चलाउने सामान्य मान्छे हुनुहुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ । ठूलो मुख बाउने बानी थिएन –वहाँको । बेलाबेला गोरखधन्दाका सीप हामीलाई सिकाउनु हुन्थ्यो । मैले धेरै सीपहरू मेरा बालाई गुरु थापेर सिकेको छु । अनुच्छेद र संकथन लेख्न विश्वविद्यालयको अध्ययनले सिकायो होला ! ठूला कुरा गर्दिनँ म तर गर्वका साथ भन्छु –‘यो जीवनमा मैले आफूलाई आफ्नो खुट्टामा उभ्याउन जहिले जेजे सिँके । सिकेको छु । ती सबै मेरा बाका आशीषका प्रसादहरू हुन् भन्न पाउँदा गर्वले छाती फुलेल हुन्छ ।
बा भन्नुहुन्थ्यो –‘सफल र असल हुनु दुई फरकफरक कुरा हुन् । यी दुईमा अप्ठेरो बेलामा एकलाई छान्नु परो भनेपछिल्लोचाहिँ रोज्नु ।’ दुईभाइ के गर्छन् त्यो मलाई मतलब भएन । म भनेपछिल्लो शब्दका कित्तामा ससिम भएरै जोडिएको रहेछु ।
बहत्तरको दशैँमा बा अमेरिका भ्रमणमा जानु भएकाले र दुवै भाइहरू अमेरिकी आप्रवासी भएकाले बाको आज्ञा शिरोपर गर्दै मैले आफैँले जानी नजानी घरमा जमरा राखेँ । देवी पुजनोत्सवमा भाग लिएँ । सप्ठेरा ठाउँ संस्कृतमा र अप्ठेरा ठाउँ नेपाली भाषाटीका वाँच्दै चण्डीपाठ गरेँ । जमरा पूर्वपट्टि ढल्किएनन् । घरबूढीका सल्लाहानुसार पत्रिकाले छोपियो । जसै पूर्व ढल्किए । सो ढल्काइलाई‘स्काइप’ प्रयोग गरेर बालाई नेदेखाइ धरै मिलेन । सातसमुद्र पारिबाट बाले मैले न्याशध्यानमय पाठपूजा गरेर नौरथाको मैजारो गरेकामा सफलताको तोकादेश लगाइदिनु भयो । अनि मात्र मन शान्त भयो ।
बल्ल यहाँ घरस्तरीय केबिनेट बस्यो । पत्नीले गृह मन्त्रालय सम्हालेकीले उनको हंकीडंकी बढीनै चल्छ । नेपालको केबिनेटमा गृहमन्त्रीको सानजस्तो ।‘कमाई धमाई नल्याए ज्वाइँकन दोष, पकाई तुल्याई नदिए छोरीकन दोष’ भन्ने प्राचीन आहानमा चलेका छौं –हामी अर्वाचीन दुई जोईपोइ । देश चलाउनभन्दा गाह्रो छ घर चलाउन । कहिलेकाहीँ उनका तर्फबाट बहस थालिन्छ । म प्रत्येक पेसीमा तर्क नभएको प्रतिवादीको कानून व्यवसायीझैँ भई भाका मात्र सारेर तारिख थापिरहेको हुन्छु । हो, पनि घर भनेको देश नै हो । विविध कार्यान्वितिका फायलहरू घरव्यवहारमा मुल्तविरहेका हुन्छन् । सीमित बजेटमा असीमित विकासका सूचकहरू पार लगाउँदै सन्तानका पखेँटामा प्वाँख हाल्नु छ । देशमा काम छैन । काम पाए दाम छैन । विदेश बत्तीने आसाले उफ्रिन थालेपछि अभिभावक हुनुको बोझले घाँटीमाथिको जाँतो जो बनाएको छ ।
‘बिते हूए कल’ भनेझैँ फेरि पुरानिएका दिनहरू नै‘रिल लाइफ’ बनेर‘रियल लाइफ’मा आउन थाल्दा ठिटो बाछोले दूधका लोभमा माउको कल्चौंडामा धम्काहान्दा मुखमा आएको फिँजको मिठासले विगत्को गुन्द्रीमा आरामले सुताउन लैजाँदो रै’छ ।
घरपायक जागिरे हुनुहुन्थ्यो बा । खटालु भार्या हुनुहुन्थ्यो आमा ।‘खान पुगोस् दिन पुगोस्’ भन्ने वाक्यांशझैँ ती दिनमा परिवारमा लाउन खानको कुनै पर्वाह थिएन । उड्नेमा हेलिकप्टर र गुड्नेमा गाडीमात्र खाइएन् होला –केटाकेटीमा । जे पनि पच्ने । रुच्ने । खायो –दौडियो । दौडियो –खायो ।‘आमाको होटल र बाउको लज’ फ्रि हुँदा त होनि मानिसका छाउराछाउरीले मस्ती गर्ने । आफ्नो कमाइ भएपछि त फाँकमुठीमा पनि लोभ लाग्दो रहेछ ।
हुन पनि‘बाउले दिएको भैँसीभन्दा आफूले बाटेको दाम्लाको माया हुन्छ’ भन्थे बूढापाकाहरू । गमी ल्याउँदा लाग्छ –हो रहेछ । साह्रैआना सत्य रहेछ । जतिसुकै स्थुल पुस्तकका पोथी रटान गर्नुभन्दा अभावको जाँतोमा पिसिएर, दुःखको पिङमा मच्चिएर जान्नु र सिक्नु जीवनभरिका लागि नै अकाट्य ज्ञानगंगा पिउनुजस्तै हो ।
मैले जानेको यही हो । अरू केही जानिन् ।
काँधमा जुवा लगाइएका गोरुजस्ता हलोमा पिसिएका दुई अभिभावक छँदा कुनै टण्टा हुन्थेन । गरिन्थेन । आज पत्नी र म सो वृषभद्वय भूमिकामा छौं । बाआमा रिटायर्ड लाइफमा हुनुहुन्छ । अर्ती उपदेश बेलाबेला दिइरहनुहुन्छ । हामी शिरोपर गरेर लागू गरिरहेछौं ।
जिम्मेवारीले गह्रौं भएर थिच्न थालेपछि दशैँका रहरहरू क्रमशः बयेलिएका हुन् । जीवनका संकथनहरूमा‘बाले दिएको भैँसीभन्दा आफूले बाटेको दाम्लाको माया बढी हुन्छ’ भन्ने उखानले घर गरेको हुँदो रै’छ । सकसको सार्थक परिभाषा वाच्यार्थमाभन्दा कार्यार्थमा तीक्ष्ण पाइँदो रै’छ । यद्यपि बालापन् भावार्थमा टिकेको हुँदो रै’छ ।
टुकुटुकु हिँड्न थालेपछि दशैँका सम्झनाहरू लहर बनेर आएका छन् । केरा पकाउन माटाको खाल्डो खन्दा हामी सिँगाने केटाकेटीहरू लहरै बसेर हेर्दथ्यौं । परालले पोलेको पिरो धूँवा आँखामा आएको चिप्रा मिश्रित आँसुलाई ससाना हातले पुसेको सम्झना आलो भएको छ ।
जीवनमा धेरै दशैँ आए । गए । कति मिठा हुन्थे विगत्का दशैँहरू । बालीमा लुगा सिउने दमाईले चलाएको मिसिनको खिटीटी आवाजले एकातिरबाट दशैँलाई बोलाउँथ्यो भने अर्कोतिरबाट चिउरा कुट्न ढिकीमा हालिएका घान र तिनका आला बास्नाले तनमात्र लोभ्याउँथेन । मुखमा लोभका र्याल पनि निकालिदिन्थ्यो । हप्ता पन्ध्रदिन लगाएर पकाएका केराका घरीबाट उत्सर्जित बास्नाले मनको पहाडमा एकाएक पहिरो खसाउँथ्यो । आमा र बाले भनेका आदेशात्मक भावका पहेलीहरू मान्दामान्दै पनि केटाकेटी बुद्धिले गरेका कतिपय ओर्याइँहरू आज सम्झँदा पनि हर्षाश्रुमय भावमा टप्कन्छन् ।
पाँचदस रुपैयाँ दक्षिणाका लागि हुरूरू गर्दै मावल र बूढोघर गइन्थ्यो । विराटनगर कञ्चनबारीका सम्झनाहरू पनि चुरैझैँ अँझै ठडिएका छन् । झापा र इनरुवाका भलिभाँती कुराहरू यो सम्झौटोमा सप्पै लेराउन सकिनँ । कुनै समय लामो अवकाश मिल्यो भने कितापै बनाउनु पर्ला भन्ने सोच राखेको छु ।
तराईमा जन्मेर हुर्केर तारुण्यवय हाँसिल गरेका मेरासामु अनगिन्ती लेखनीका फाँकीहरू छन् –तिनीहरूलाई अनेक विधोपविधामा आलेखन गर्न सकिन्छ । कतै ती कविताका श्लोक हुन सक्छन् । कतै ती आख्यान र कतैकतै निबन्धका संकथनहरू हुन सक्छन् । जीवनमा लेखिएका कुराभन्दा नलेखिएका कुराहरू नै अधिक हुने रहेछन् । एउटा लेखकले नदीझैँ बगिरहन सक्नु पर्ने रहेछ । जीवन निर्वाहका क्रममा भोगेका उहापोहहरू नै समाजलाई दिने हो । कलात्मक बान्कीका साथ आफूमा भएका सफल सोचले भावि दिनमा मार्गशर्दन गर्ने गर्दारहेछन् ।
तराईका ती दशैँ सम्झेर यतिखेर म नोष्टाल्जिक भएको छु ।
"हेल्लो चोर काले !"